» राष्ट्रिय सभामा यसरी हुँदैछ भिडन्त, बादललाई ओलीपक्षकै घात
राष्ट्रिय सभामा यसरी हुँदैछ भिडन्त, बादललाई ओलीपक्षकै घात
२०७८ जेष्ठ ४, मंगलवार १४:२०
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राम बहादुर थापा ‘बादल’ र डा. खिमलाल देवकोटाबीच जेठ ६ गते प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । बादललाई नेकपा(एमाले)ले उम्मेदवार बनाएको हो भने डा. देवकोटालाई एमालेकै माधव नेपाल समुहले उम्मेदवार बनाएको छ । डा. देवकोटालाई एमाले नेपाल पक्षका अलवा काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी(उपेन्द्र–बाबुराम समुह)को समर्थन रहेको छ ।
एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान भैसकेको छैन्, त्यसकारण नेपाल समुहले डा. देवकोटालाई नै मत दिने सम्भावना बढेको छ । उता, ओली समुहकै केहि मत डा. देवकोटालाई जाने सम्भावना बढेको छ । ओली निकट केहि नेताहरुले आफ्ना खास मान्छेहरुलाई बादललाई भोट नदिन आन्तरिक सर्कुलर गरेका छन् ।
बादलका कारण आफ्नो राजनीतिक भविष्य असुरक्षित ठान्दै महासचिव ईश्वर पोखरेल, उप महासचिव बिष्णु पाौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले आफु निकट मतदाताहरुलाई क्रस भोटिङ गराउने श्रोत बताउँछ । पार्टीले ह्विप लगाए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुनेछ । गोप्य मतदानमा कसले कसलाई मत दियो भनेर एकिन गर्न सकिन्न । क्रस भोटिङको तथ्य पत्ता लगाउन नसकिने भएकाले पनि बादललाई हराउन चाहनेहरुका लागि सहज हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका बादल अहिले गृहमन्त्री छन् । उनी ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुवात देखि नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । एमाले प्रवेश गरेपछि बादललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने पक्षमा ओली देखिँदै आएका छन् । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा बादललार्य ल्याउने तयारीमा ओली देखिएपछि ओलीको उत्तराधिकारी बन्न लाइनमा बसेका नेताहरु झन तर्सिएका छन् ।
बादललाई राष्ट्रिय सभामा रोक्न सके गृहमन्त्रालय पनि फुस्काउन सकिने र राजनीतिक रुपले पनि सुरक्षित महशुस हुने आँकलन सहित ओली क्याम्पकै केहि नेताहरु बादल हराउ अभियानमा लागेका हुन् । माधव नेपाल समुहले अहिलेसम्मको अवस्थामा डा. देवकोटालाई नै मत दिने सम्भावना कायमै छ ।